एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बस्दै, नेपाल पक्षले बुझाउँला स्पष्टीकरण ? « Naya Page
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बस्दै, नेपाल पक्षले बुझाउँला स्पष्टीकरण ?
काठमाडौं, ७ साउन । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज (बिहीबार) पनि बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने एमालेले जनाएको छ ।
यता हिजै नेकपा एमालेको वैठकले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएको छ । के, कति कारणले देउवालाई विश्वासको मत दिनु पर्ने वाध्यता परेको भनि पत्रमा प्रश्न सोधिएको छ । यसरी सोधिएका सांसदहरुमा ओली पक्षकै आठ सांसदहरु पनि रहेका छन् ।